Samachar Batika || News from Nepal » मृगौला फेर्न लागेका ओलीले राज्यकोषबाट लिए १७ करोड उपचार खर्च!
पोखरा – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा चाँडै मृगौला फेर्न लागेको बताए। बागमती प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पाँच दिन अस्पताल बस्ने र छैठौं दिन निवासमा आएर काम गर्ने बताए।
‘छिट्टै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दैछु। पाँच दिन अस्पताल बस्छु। छैठौं दिनदेखि काम गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अझै १०-१५ वर्ष मलाई केही हुन्न।’ १२ वर्षअघि ओलीले पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए। पछिल्लो समय उनको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको छ। अहिले उनी नियमित रूपमा डायलासिस गरिरहेका छन्।
अब चाँडै उनको मृगौला प्रत्यारोपण हुनेछ। तर, लामो समय देखि रोगको शिकार बनेका ओलीले अहिलेसम्म राज्य कोषबाट कति उपचार खर्च लिए त? धेरैलाई चासो लाग्न सक्छ। केहीसमय अघि पूर्वसचिव भीम उपाध्ययले फेसबुकमा वालमा राखेको तथ्यांक अनुसार भने ओलीले हालसम्म १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार ९ सय २ रुपैयाँ सरकारी कोषबाट लिएका छन्।
यस्तो छ ओलीले ०५४ देखि ०७२ सम्म राज्यकोषबाट लिएको उपचार खर्चको विवरणः
यसरी ओलीले ०७२ फागुन सम्ममा जम्मा १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार ९ सय २ रुपैयाँ राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएका छन्।
प्रकाशित मिति १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०४:३९